China Wholesale Yakagadziriswa Yakasarudzika Label Mabhokisi 3D Lashes 100% Real Mink Eyelashes Vendors fekitori uye vagadziri | Weiti
Wholesale Yakagadziriswa Yakasarudzika Mabhokisi Mabhokisi 3D Lashes 100% Real Mink Eyelashes Vatengesi
1, AILSA chimiro 18mm mink fur lashes
2, Nyoro, fluffy, yakasikwa 3d eyelashes
3, Yakasarudzika yakavanzika chitambi inowanikwa
4, 100% yakaitwa nemaoko mhando yepamusoro ultra-mwenje mink bvudzi
OEM & ODM YEMAHARA EASI
Tsika dhizaini yakavanzika logo
Wholesale yemakwikwi mutengo
Yakapfuma eyelashes yekugadzira ruzivo
100% chaiyo mink hutsinye mahara
Yakasarudzika yakavanzika logo
200000 pairi pamwedzi
Eyelashes edu enhema ese akagadzirwa nemaoko, akagadzirwa ne-Ultra-mwenje mink bvudzi, iro rakapfava uye rakapfava seyako eyelashes. Iwo eyelashes enhema akagadzirwa nemaoko anogona kushandiswazve uye kunyatso kurapwa. Uchishandisa tekinoroji yemaziso eyelash, eyelashes inogona kunge yakasikwa uye yakapfava seyelashes chaiwo, ichikubvumidza iwe kugara wakamira.
Mhando dzakasiyana-siyana dzekutengesa dzinopisa dziripo, uye inotsigirawo kugadzirisa masitaera anodikanwa nevatengi. Vatengi vanongoda kutipa izvo zvakasarudzika zvinodiwa uye ma parameter kana epanyama sampuli.
Yakasarudzwa nhema eyelashes mbishi zvigadzirwa, mushure memakore eruzivo kuunganidzwa, isu tatova neepamusoro-soro, inoshanda mbishi zvinhu vatengesi, kwenguva refu-inotipa isu nezvakanaka mbishi zvigadzirwa.
100% dzakagadzirwa nemaoko. Zvichienzaniswa nekugadzirwa kwemuchina, kugadzirwa kwakaitwa nemaoko kunogona kuve nechokwadi chekuti eyelashes dzenhema hadzizovhiringidze, uye isu tinoshandisa glue neruoko kuti tione zviri nani kuti eyelashes haidonhe.
Mhando dzakasiyana dzenhema eyelash kurongedza zvinogona kugadzirwa. Zve logo logo kugadzirisa, iyo yakagadzirira stock kurongedza inotsigira 3d UV kudhinda. Bhokisi rakagadziriswa rinotsigira kudhinda kweUV uye kupisa kutsikisa kudhinda.
Kune akagadzirira stock lashes, iyo nguva yekuendesa iri mukati maawa makumi mana nemasere, yeyakagadzirwa maronda, iyo nguva yekuendesa iri mukati memazuva 7-25.
Kubvunza kwevatengi kuchazotarisirwa panguva yekutanga. Pamubvunzo wekukurumidzira, ndapota taura nesu kuburikidza nefoni kana yakananga meseji.
Kune chero matambudziko ehunhu kana kukuvara kuburikidza nekutakura, unogona kukumbira kudzorerwa kana kutsamwira zvinhu mukati memazuva matatu ekushanda.
Sei kupfeka shamhu dzenhema?
Eyelashes enhema anogona kuita kuti maziso aone kunge akakura uye achiyevedza, uye mwero wekukombama unogona zvakare kuenderana eyelashes, inozotaridza kunakidza.
Eyelashes enhema aivapo muIjipita yekare neRoma. Eyelashes akamboonekwa sechiratidzo chinokwezva kwazvo. Gare gare, mushure mekuzvarwa kwenhema eyelashes, vanhu vazhinji vakatevera eyelashes. Muna 1916, director director akashandisa bvudzi chairo kugadzira eyelashes enhema pazvinodiwa zvemufirimu uye terevhizheni kugadzirwa. Gare gare, modhi yeBritain yakatanga tsika yekupfeka eyelashes dzenhema, uye vanhu vazhinji vaiziva nezve kuvapo kwenhema eyelashes.
Mune inotevera nhanho yemanyepo eyelashes, kune mamwe marudzi, akasiyana maumbirwo uye mavara, uye akasiyana zviitiko. Asi kunyangwe zvodii eyelashes dzenhema, ivo vanogona kuita kuti maziso "ataure" mushure mekunge aiswa, uye maziso anoyevedza anokwana kunyengera. Gare gare, vanhu vazhinji havana kugutsikana nekupfeka eyelashes dzenhema uye vaishuvira kuti varere vachikura pazviso zvavo zvachose, uye hunyanzvi hwekuwedzera eyelash hwakazvarwa.
Kazhinji, eyelashes ekutanga enhema aingove ekuratidza runako rwevakadzi, asi ikozvino eyelashes enhema anoteerera zvakanyanya kuita, anokodzera chimiro chemaziso chevanhu, asi zvakare anogona kuita kuti maziso aone seakakura uye anofadza.
Pashure: Wholesale Yakavanzika Label 100% Yakaitwa nemaoko Hutsinye Mahara 3D Mink Eyelashes Vendor
Zvadaro: Gadzira Yako Yega Yakasarudzika Label Lashes Wholesale Nhema Eyelashes Mink
3d mink lashes mutengesi
gadzira yako maronda
mink eyelashes vatengesi
private chitaridzi eyelashes
mink lashes, eyeliner, Vatengesi ve Eyelash, Ziso Lashes, lipgloss, Eyelash Kuwedzeredzwa,